Recent Blogs – Page 32 – Kathmandu Baptist Church 'Ebenezer'
October 23, 2017LiteratureNo comments yet
लौ आयो भुइचालो
सबको मुखमा आउन थाल्यो ‘लौ आयो भुइचालो’ डर र त्रासले भरिदियो, सबको मुख भो कालो। बालबच्चाहरू दङ्ग परे, न रोदन न हर्ष सबलाई मनमा लाग्न थाल्यो मर्ने भो यै वर्ष माथि हेर्‍यो जता ततै पर्दा लाए झैं कालो होसै चोर्‍यो सातै लग्यो कत्रो भुइचालो। मात्र एक छिन कम्पन...
समग्र पोखरा निदाइरहँदा
समग्र पोखरा निदाइरहँदा हामी सराङकोट उक्लिरहेथ्यौं पूर्वी क्षितिजमा लाली नचढ्दै अँ समग्र धर्ती नब्युँझदै। यात्रा उक्लिंदै गर्दा सरल सहज मार्गहरूमा अचानकै बाहन रोकियो व्यवधान र अड्चनहरूमा। टाकुरी र गन्तव्यतर्फ यात्रा पुन: बढ्यो! कस्तो सुन्दर क्षण अनि मनमोहक मानौं विश्व लोलाएको छ। अब क्षितीजमा लाली पोतिएको छ अनि...
August 11, 2017ArticlesNo comments yet
फेसबुक फेसबुक लगायतका सामाजिक संजालले छिटो भन्दा छिटो सूचना प्रसारण गर्ने कार्यमा ठूलो योगदान दिएको छ। यसले नजीकका मित्रहरू विचमा आपसी सम्बन्ध तथा सहयोगको विस्तार गरेको छ। यी उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भई तिनको प्रयोग गरिएमा यसलाई राम्रो मान्न सकिन्छ। तसर्थ फेसबुक, ट्विटर जस्ता सामाजिक संजाललाई प्रयोगै गर्न नहुने भन्ने होइन। तर गलत व्यक्तिहरूले...
April 11, 2017ArticlesNo comments yet
सबको मुखमा आउन थाल्यो लौ आयो भुइचालो डर र त्रासले भरिदियो, सबको मुख भो कालो। बालबच्चाहरू दङ्ग परे, न रोदन न हर्ष सबलाई मनमा लाग्न थाल्यो मर्ने भो यै वर्ष मथि हेर्‍यो जता ततै पर्दा लाए झैं कालो होसै चोर्‍यो सातै लग्यो कत्रोभुइचालो। मात्र एक छिन कम्पन थामिदा...
March 29, 2017ArticlesNo comments yet
जुन घडी परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो। त्यस घडी उहाँले शिद्ध योजना उद्देश्य साथ सृष्टि गर्नु भएको थियो। परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरुपमा सृष्टि गर्नुभएको थियो। आफ्नै प्रतिरुपमा नर र नारी नै गरि सृष्टि गर्नुभएको थियो ( उत्पत्ति १:२६,२७)। ऊ भूमिको माटोद्वारा बनाइएको थियो। जसरी कुमालेले यही जमिनको माटोद्वारा विभिन्न प्रकारका...
March 27, 2017ArticlesNo comments yet
कहाँबाट शुरु भयो कहाँ हो अन्त कोही क्रूर कठोर, कोही छन् सन्त सास त सबै फेर्छन्, तर छैनन् सबै जीवित अर्थपूर्ण जीवन भने येशू ख्रीष्टमै छ सिमित। पैसा, सम्मान, ओहोदा अनि धन थरिथरि सबको सोख र लालसा, अनि दौड-धुप मरीमरी यो अमूल्य जीवन मात्रै यति? प्रश्नको जलन कति भतभति!...
March 25, 2017ArticlesNo comments yet
“यिनीहरूचाहिँ ती थेस्सलोनिकामा हुनेहरूभन्दा उत्तम रहेछन्; किनकि यिनीहरूले मनको पूरा तयारीको साथ वचन ग्रहण गरे, र यी कुराहरू यस्तै हुन् कि होइनन् भनी दिनहुँ पवित्रशास्त्रहरूमा खोजी गर्दथे।” प्रेरित १७:११ बाइबल अध्ययनको लागि एक तयारी मन चाहिँदछ। परमेश्वरको वचन ग्रहण गर्नका लागि हाम्रो हृदयको तयारीको साथसाथै हाम्रो खोजी र परिश्रम पनि...
March 23, 2017ArticlesNo comments yet
ख्रीष्टका अठाह्र वर्षहरू
येशू ख्रीष्ट बाह्र वर्ष देखि तीस वर्षसम्म कहाँ हुनुहुन्थ्यो? लुका २:४२ ले भन्दछ, “अनि जब उहाँ (येशू) बाह्र वर्षको हुनुभयो, तब चाडको रीतिअनुसार उहाँहरू (यूसुफ र मरियम) माथि यरुशलेम जानुभयो।” लूका ३:२३ ले बताएको छ, “अनि येशूले शुरु गर्नुहुँदा उहाँ आफै प्राय: तीस वर्षको हुनुहुन्थ्यो…” अब बिचार गर्नुहोस त, येशूको...
March 21, 2017ArticlesNo comments yet
परमेश्वरले आफैलाई मानिसमाझ प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो बारेमा सृष्टि र बाइबलद्वारा प्रकाश गर्नुभएको छ। सृष्टि र बाइबलद्वारा नै हामी परमेश्वरलाई जान्न र चिन्न सक्छौं। यी दुई प्रकाशहरू पुस्तकहरू झैं छन्, जसको अध्ययनले परमेश्वरको महानता र वैभव छर्लङ्ग हुन्छ। परमेश्वरको प्रकाशको पहिलो पुस्तकको रुपमा प्रकृतिलाई लिन सकिन्छ। जुन उहाँको सुन्दर...
March 19, 2017ArticlesNo comments yet
मेरो विश्वास मेरो निश्चयता
संघर्ष धेरै गर्नुपर्छ, जुध्नुपर्छ, लड्नुपर्छ, भिड्नुपर्छ भाग्नुपर्छ, भगाउनुपर्छ जिन्दगीका समस्याहरूसँग कहिले राष्ट्रका घुन र धमिराहरूसँग कहिले वनका जूकाहरूसँग कहिले गर्मीका पसिना र मच्छेडहरूसँग कहिले जाडोको हिउँ र कठ्याङ्ग्रीदो सिरेटोसँग कहिले आँशुका थोपा थोपा र आँशुका धाराहरूसँग। मैले धेरै प्रयास गरें अन्धकार, अशिक्षा, अन्धविश्वास विरूद्ध राजनीतिको सहारा लिएर टोल, समाज...